Global Voices teny Malagasy » Ampahany tamin’ny fihaonana GV voalohany tany Dar es Salaam · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 20 Jona 2019 4:24 GMT 1	 · Mpanoratra Christian Bwaya Nandika Salohy Randriafanomezantsoa
Tany amin'ny faran'ny taona 2014, nikarakara ny Fihaonana GV voalohany tao Dar es Salaam ny Lingua Swahili . Ny KINU Innovation Hub  no nampiantrano ity fihaonana ity izay natao ny 2 Novambra 2015 nanomboka tamin'ny 12 ora ka hatramin'ny 5 sy30 mn hariva. Anisan'ireo mpandray anjara mavitrika miisa 18 ireo mpianatry ny oniverisite, bilaogera, mpikaroka, teknolojia vitsivitsy sy ny olo-malaza amin'ny fampitam-baovao ary ny olona miasa miaraka amin'ireo FTMF ao Dar es Salaam.
• Nitarika adihevitra momba ny andraikitry ny asa fanaovan-gazetin'olon-tsotra ao Tanzania i Deogratias Simba  izay nahaliana tokoa ireo mpandray anjara. Nozaraina ireo zava-niainana mahaliana momba ny toe-draharaha sy ny fampiasana ny tambajotra sosialy amin'ny famoronana votoaty.
• Nizara ny tetikady mampientanentana momba ny famoronana votoaty ao an-toerana ho an'ny mpihaino Swahili i Constantine Manda, bilaogera sady mpikaroka ao amin'ny Twaweza.org . Nanome rohy tsara izy ho an'ny anjara andraikitry ny ekipa kely Lingua Swahili miha-mitombo .
• Tonga nanatevin-daharana anay ny toniandahatsoratra mpanorina, Joe Tungaraza , avy any Aostralia tamin'ny alàlan'ny skype taorian'ny sakafo antoandro. Nampahafantatra vaovao momba ny Global Voices – Tetikasa Lingua izy ary nilaza ny antony nanapahan'izy ireo hevitra ny hamolavola ny ekipa Lingua Swahili tamin'ny taona 2008. Afaka nametraka fanontaniana momba ny hevitry ny Lingua Swahili ireo mpandray anjara.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/06/20/140598/
 Lingua Swahili: https://sw.globalvoicesonline.org/
 KINU Innovation Hub: http://KINU.co.tz
 Deogratias Simba: https://sw.globalvoicesonline.org/author/simbadeo/
 Joe Tungaraza: https://globalvoicesonline.org/author/nambiza/